Messi oo kala hadlay Ernesto Valverde xaalada uu kaga sugan yahay Malcom kooxda Barcelona – Gool FM
Messi oo kala hadlay Ernesto Valverde xaalada uu kaga sugan yahay Malcom kooxda Barcelona
(Barcelona) 09 Nof 2018.Lionel Messi ayaa isku dayaya inuu dhex dhexaadiyo macalinka kooxda Barcelona Ernesto Valverde iyo saaxiibkiis Malcom, sababa la xiriira inuusan kasoo muuqan kooxda mudo dheer.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Lionel Messi uu la hadlay tababaraha kooxda Ernesto Valverde waxaana uu weydiiyay hadii uu wax qalad ah ka tabanayo laacibka reer Brazil ee Malcom.
Laakiin Valverde ayaa u xaqiijiyay Messi inuusan wax dhibaato ah ku qabin Malcom, ciyaaryahanka ayaa intaas kadib ka qeyb qaatay kulankii Inter ee Champions League, wuxuuna dhaliyay goolka kaliya ee kooxda Barca.
Warar horay u soo baxay ayaa sheegayay in macalinka Barcelona Valverde uusan ku qancin dhameystirka heshiiska Malcom, waana sababta uusan ugu tiirsanaanin adeegiisa inta badan kulamada xili ciyaareedkan.
Kooxda Chelsea oo dalab xoogan u diyaarineysa si ay u sameyso saxiixan bisha Janaayo
Unai Emery oo Fariin Damqasho leh u diray xiddigiisa Welbeck kaddib markii Xalay loola cararay Isbital